မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား
Posted by asiamasters on May 23, 2012 in Complaint / Claim, History, Think Different | 32 comments
တကယ်တော့ ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအခြေအနေတွေက မြန်မာနိုင်ငံကို အရေးပေါ်အခြေအနေတောင်ကြေညာသင့်တဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်ပြသနာ ဒီနေ့က စဖြစ်တဲ့ ပြသနာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး၊ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခောတ်၊ ဆိုရှယ်လစ်ခောတ်၊ တပ်မတောအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ န၀တနဲ့ နယက ခောတ်တွေအားလုံးပေါင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် KIA သောင်းကျန်းသူတွေရဲ့ ဓါတ…်တိုင် မိုင်းခွဲတာလောက်ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ပြသနာကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ န၀တ အစိုးရတာဝန်ယူချိန်မှာ တိုင်းပြည်ကချွတ်ချုံကျနေချိန်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတတွေ ကြောင့် နလံပြန်ထူလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးစားပေးတွေက အလွဲကြီးလွဲခဲ့တယ်။ နယခ ခောတ်ဆိုတော့လည်း အဆိုးဆုံးပါပဲ။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အမှန်ဘက်ကိုသွားလိုသူတွေ အားလုံးပျက်စီးသွားကြတယ်။ ဦးစားပေးတွေ အလွန်ပဲမှားယွင်းခဲ့တယ်။ စနစ်တွေပေါ့။ စနစ်တွေကိုပြောရင် Political System, Economic system နဲ့ Social system တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ခောတ်တုန်းက Economic system က socialist system ဖြစ်တယ်။ ဒီစနစ်အရ လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို နိုင်ငံတော်ကပဲလုပ်မယ်။ ထွက်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို အားလုံး အညီအမျှ ခံစားကြမယ်ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ လျှပ်စစ်လဲအလကားပေးတယ်။ ရေလည်းအလကားပေးမယ်။ မွေးရာကနေသေသည်အထိအခမဲ့ဆေးကုသခွင့်လည်းပေးမယ်။ ဒီလိုအယူအဆမျိုးနဲ့လုပ်ခဲ့ကြတာပဲ။ နားထောင်လို့ကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်။ လူတွေက ဘာမှကို လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ အားလုံး အလကားရမဲ့ ပဒေသာပင်ခောတ်ကို ရောက်သလိုဖြစ်နေတယ်။ လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့ အလကားပဲ။ ဒီဆိုရှယ်လစ်ခောတ်ဟာ အောင်မြင်သလား မအောင်မြင်သလားတော့မသိဘူး။ အားလုံးဟာ သူခိုးတွေပဲဖြစ်ကုန်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာက စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအားလုံးက အစိုးရဖြစ်တာရယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ မြို့ပြ တွေကို တည်ဆောက်ပြီးနေတတ်ခဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ လုပ်ပြီး အရောင်းအ၀ယ်ကောင်းအောင်လုပ်တတ်သူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ နဂိုကတဲက လမ်းပျောက်နေသူတွေပါ။ အလကားရတာနဲ့ပဲ ငြိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေပြီး ကျောင်းသားလေးတွေ အရက်မူးရန်ဖြစ်တာကစလို့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကြီးဟာ ပြိုလဲခဲ့တယ်။ ဒီဆိုရှယ်လစ်ခောတ်နောက် စစ်အစိုးရတက်လာတယ်ဆိုပါတော့။ စစ်အစိုးရတက်လာချိန်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားငွေ က ဒေါ်လာ တစ်သောင်းမပြည့်ပါဘူး။ ဒီလိုနဲလုပ်လာလိုက်တာ နောက်ပိုင်းတော့ ပတ္တမြားတွေတွေ့၊ ဓါတ်ငွေ့တွေတွေ့၊ တရုတ်ပြည်ကြီးကလည်း သူ့နိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ အဟောင်းအနွမ်းအစုတ်အပြတ်တွေအားလုံးကို ဆေးသုတ်ပြီး အသစ်လုပ်ရောင်းတဲ့ခေတ်ဖြစ်လာတော့၊ အားလုံးရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ လုပ်သမျှ Project တွေက အစုတ်ပလုတ်တွေ၊ ကြားမှာ ခိုးသားငါးရာက ဖြတ်ခိုးတယ်။ ခေါင်မိုးကအစမိုးမလုံတော့ အားလုံးဟာ၊ ပေါက်တတ်ကရဖြစ်ကုန်တယ်။ ဒီတော့ ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားစက်ရုံတွေသာပြီးသွားတယ်။ ဘယ်စက်ရုံမှ ကောင်းကောင်းမထွက်နိုင်ဘူး။ မထွက်တာပဲ ကံကောင်းမလိုဆိုနေရမယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလုပ်ငန်းက ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဖြန့်ဖြူးမှု နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ အခုဖြစ်နေတာက မထုတ်နိုင်တာ၊ ထုတ်နိုင်ဦးတော့ ဖြန့်ဖြူးဖို့ကလိုဦးမယ်။ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ အခု ၂၀၁၁ လောက်ထိပေါ့လေ ပေါ်လစီပိုင်း ဘာမှ မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဘာစနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုတာလည်းသေသေချာချာမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီတော့ ပြည်သူလူထုကလည်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဆိုတာ အစိုးရကလုပ်ပေးရမှာ၊ အစိုးရတာဝန်ပဲလို့ပဲ နားလည်ထားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အခု လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေများလာတဲ့အချိန်မှာတော့ မရှုနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်နေပြီပေါ့။ တကယ်တော့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမလုံလောက်ဘူးဆိုတာ ဒီနိုင်ငံမှာနေထိုနေတဲ့လူသားတွေ ဘယ်လောက်အဆင့်အတန်းနိမ့်တယ်ဆိုတာဖေါ်ပြနေတာပါပဲ။ အခု မီးမလားဘူး။ ဒီတော့ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲ။ အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတာပေါ့။ လစာ၊ အခွင့်အရေး ယူထားတဲ့ အရာရှိအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတာပေါ့။ ဒါကို နားလည်ပြီး၊ အမှန်ဘက်ကိုပြောင်းလာဖို့လိုတယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမရှိရင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ၀န်တောင်မှု လုပ်ငန်းအားလုံး ပျက်စီးပြီး ၀င်ငွေတွေထိခိုက်နေတာပေါ့။ ပြည်သူလူထုဖက်က နားလည်ဖို့ကလည်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို အလကားတော့မရနိုင်တော့ဘူး။ ချွေတာသင့်တာချွေတာရမယ်ဆိုတာ သိရမယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဖို့အားလုံးကျိုးစားကြရမယ်။ အခုအခက်အခဲကြုံတွေ့ရင် နောင်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြရမယ်။ အချောင်အမြတ်ထုတ်သွားသူတွေကိုရှင်းပစ်ရမယ်။
အခုလိုဖြစ်ရတာ တရားခံ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ လူတိုင်းသိနေတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေ ပိုတောင်သိပါတယ်။
ခိုးထားတာတွေ နဲ့နောက်ထပ်ရစရာ ရှိတာတွေ ပေါင်းလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။
ဒီငွေတွေနဲ့စွမ်းအင်တွေ အလျှံပယ် ရနိုင်ပါတယ်။
စနစ်တကျ စိစစ်ဖေါ်ထုတ် အရေးယူလိုက်ရင်
မြန်မာ ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ အခုလိုမျက်နှာငယ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။
အခု လျှပ်စစ်မီးမလုံလောက်မှု့ဟာ ဘာကိုသက်သေပြနေသလဲဆိုတော့
နအဖ-န၀တ အဆက်ဆက် အစိုးရလုပ်လာတဲ့သူတွေ မလုပ်တတ်ပဲ လိမ်ပြီးလုပ်လာတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေတယ်။
အခု အစိုးရနေရာများများကလည်း သူတို့ ဘဲဆက်ယူထားကြတာဆိုတော့..ဒီလိုဘဲဆက်လိမ်နေကြဦမလားဆိုတာတော့…..
အရှေ့ကို အနောက် နဲ့ကုလားဖန်ထိုး
အမှန်အကန်ချိုး မယ့် သခင်မျိုး ။
နအဖ-န၀တ အဆက်ဆက် အစိုးရလုပ်လာတဲ့သူတွေ မလုပ်တတ်ပဲ လိမ်ပြီးလုပ်လာတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေတယ်
ပြီးတော့နအဖ-န၀တ အစိုးရအဆက်ဆက် ရသမျှအခွင့်အရေးတွေယူပြီး နိုင်င့တော်ရဲ့ စီမံကိန်းတော်တော်များများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့ ခရိုနီတွေကြောင့်လဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
မှိုဗူးပေါဒါ လက်ခန်ဘာဒယ်..။ အနော်လည်း တခါမန်းဖူးဒယ်.. (သိအောင်ပေါဒါ ကြောင်ကြီးလည်း ခေသူမဟုတ်ကျောင်း) လအုဖြစ်နေဒဲ့ ပတ်သနာဒွေဂ နှစ်ပေါင်းများဇွာ တလွဲစီမံအုပ်ချုပ်မှု အလွဲသုံးဇားပြုမှုဒွေရဲ့ အကျိုးဇက်… ယောဂါသိယုံနဲ့ မပီး.. ဈစ်မြစ်ကိုပါ သိမှယမယ်..။ နို့မို့ရင် ခွဲစိတ်ရမည့်လူနာ သောက်ဆေး ထိုးဆေးနဲ့ကုနေလို့ အချိန်လည်းကုံ လူနာလည်းပမ်း ဆြာဝံလည်း နာမည်ပျက်တယ်။ ဒါနဲ့ လေတပ်မှာ လျှပ်စစ်မီးမလာလို့ လေယာဉ်ပျံဆွဲဒဲ့ ဘက်ထရီကားတွေ မသုံးနိုင်ဖြစ်ပြီး လေတပ်စခန်းမှူးကိုယ်တိုင် လေယာဉ်ကို ဂိုဒေါင်ထဲ ဆင်းတွန်းပေးရဒါ စီအိုင်အေထောက်လှမ်းယေး ဂျိုးတုဂတဆင့် တွေ့ရဒယ်…။
တပ်မတော်သားတွေကို အရပ်ဖက် ၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့တာက ၁၉၆၀ လောက်ကစပါတယ်။ တပ်မတော်သားဆိုတာတွေကလည်း မြန်မာလူမျိုးတွေပါပဲ။ သူတို့ကို လေ့ကျင့်ပေးထားခဲ့တာက စစ်ပညာရပ်တွေကို သင်ပေးပြီး နိုင်ငံရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ Socialist Economy အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ Administrator နေရာတွေအတွက် ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံး အရပ်ဘက်ဝန်ကြီးဌာနကို ပြောင်းရွေ့ခံရတဲ့သူတွေဟာ ၀မ်းနဲလို့ ငိုကျွေးသူတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရဲ့ အရသာကို သိလာကြတယ်။ အလွဲသုံးစားတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ တစ်ချို့က လည်း မုဆိုးစိုင်သင်ဆိုသလို နဂိုကတည်းက ဘာမှ မတတ်သော်လည်း အပေါစားလုပ်ငန်းရှင်လေးတွေရဲ့ အကြံအဥာဏ်တွေနဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းတွေမှာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာသူတွေလည်းရှိတယ်။ သီပေါမင်း ပါတော်မမူခင်က စုဖုရားလတ်ထံ အစီရင်ခံစာတင်ပြခဲ့တဲ့ တပ်မတော်လိုပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောကြီးတွေ၊ ဘယ်နှစ်စင်း မြုပ်ပစ်လိုက်ပြီ၊ ကုလားဖြူ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ကို သတ်လိုက်ပြီဆိုပြီး ကြေးနန်းတွေသာပို့နေတယ်။ ခံတပ်မှာတော့ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘူး၊ အကုန်ပြေးကုန်ပြီ။ စုဖုရားလတ် ပို့လိုက်တဲ့လက်ဆောင်တွေကိုတော့ ယူသွားကြတယ်။ ဆိုလိုတာက မဆလခောတ်တို့၊ န၀တ ခောတ်တို့ နယက ခောတ်တွေမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သားတွေဟာ အစကတော့ အားလုံးကို မသိကြပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မုဆိုးစိုင်သင်ဆိုသလိုပဲ အပေါစားလုပ်ငန်းရှင်လေးတွေရဲ့ အကြံအဥာဏ်နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီး၊ ကိုယ်ကြိုးရှာကုန်ကြတယ်။ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ အောင်မြင်ကြောင်းကိုသာ ရေးနေတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေရပ်နေတာက ကြာနေပီ။ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ထက်မြက်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပျောက်နေသူတွေဖြစ်တော့ ငွေကိုသာကိုးကွယ်ပြီး တလွဲတွေရောက်ကုန်တယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဒါတွေကိုမြင်နေတာပဲ။ ပြန်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ကြရမှာပေါ့။ လူသားတွေကို ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ပြင်လို့မရတော့ဘူးလို့ယုံကြည်ပြီး၊ စွန့်ခွာသွားသူတွေလည်းရှိတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ရရာအလုပ်ကို နိုင်ငံခြားမှာသွားရှာမယ်ဆိုပြီး ထွက်ခွာသွားသူတွေလည်းရှိတယ်။ အခြေအနေကောင်းပြီး ငြိမ်နေသူတွေလည်းရှိတယ်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဒာအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ပျက်စီးသွားပြီးမှတော့ ပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူး။ ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင် ငွေအား၊ အချိန်အား အများကြီးနဲ့လုပ်မှရမယ်။ တစ်ချို့ပစ္စည်းတွေက ပျက်သွားရင်လုံးဝ ပြန်ပြင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် မပျက်ခင်က ထိမ်းသိန်းကြရမယ်။ ရေရှည်ခံအောင် ကြိုးစားကြရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အခုမကောင်းဘူး၊ သေချာတာပေါ့၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်က ခံယူချက်တွေ၊ စနစ်တွေကြောင့် အခုပုံစံတွေဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝတော့ ပျက်စီးမသွားသေးဘူး။ လုံးဝမပျက်စီးသွားခင် ပြင်သင့်တာပြင်ကြစို့။ လူထုကလည်း သဘောထားတွေဖေါ်ထုတ်ကြစို့။
ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး လူထုသဘောထားတွေဖော်ထုတ်နေလို့ အခုချက်ခြင်း မီးပြန်မရနိုင်ပေမယ့် နောင်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေအနေနဲ့ လက်တွတ်စပယ်ပြောလို့လုပ်လို့မရတော့ ဘူးဆိုတာနားလည်လာမှာ ။ နိုင်ငံကိုယ်စွန့်ခွာသွားမယ့်အစား ကိုယ့်ရဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက်ပြုပြင်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်မီးမှန်လာဖို့ဆိုတာက ပထမဆုံး လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ်ထုတ်ရင် ကုန်ကျမဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်ကို တွက်ရမယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒီဇယ်နဲ့ထုတ်တယ်ဆိုပါစို့ လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ်အတွက် ဒီဇယ် တစ်ပုလင်းလိုတယ်။ အခုဒီဇယ်ဈေးတစ်ဂါလံကို ၄၀၀၀ ဆိုရင် တစ်ယူနစ်ကို ၆၅၀ ကျပ်လောက်ကျနေတယ်။ ဒီတော့ အရမ်းဈေးများတယ်။ ဒီတော့ ဒီထက်ဈေးသက်သာအောင်ဘယ်လိုထုတ်မလဲ ဆိုတာစဉ်းစားရမယ်။ အခုရေအားလျှပ်စစ်တွေထုတ်ပြီးပြီ။ ရေမရှိလို့တို့ ဘာတို့ပေါက်ကရ ပြောနေလို့မရဘူး၊ ရေအားလျှပ်စစ်အသုံးပြုလို့မရဘူးဆိုရင်၊ တခြားဘာနည်းကို သုံးမလဲ။ ဒါကို စဉ်းစားရမှာပေါ့။ ကိုယ့်မှာ ငွေမရှိရင် ဘယ်က အကူအညီယူမလဲဆိုတာရှာရမှာပေါ့။ မလိုတဲ့နေရာတွေမှာတော့ လျှောက်ချေးနေပြီး လိုတဲ့နေရာမှာသုံးဖို့လိုတယ်။ ထွက်လာတဲ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို လည်း အယိုအဖ်ိတ်မရှိအောင်လုပ်မှရမယ်။ ဒီနေ့ ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ်တွေက ဒါတွေအားလုံးလုပ်နိုင်နေတာပဲ။ ဘာလို့မလုပ်သလဲ။ ဒါက အခုအစိုးရလုပ်နေတဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတွေက မလုပ်နိုင်ဘူး။ Public Company လိုမျိုးဖွဲ့ပြီးလုပ်မှရမယ်။
ကျုပ်ကတော့ ကလေးတွေးခွေးတွေး ခပ်ညံ့ညံ့ဘဲတွေးနိုင်ပါတယ်
ကမ်းရိုးတမ်းကထွက်တဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေကို ဒီအကြပ်တည်းလေးတွက်
ကံကောင်းထောက်မပြီး ဖယားသဂျားဒွေ မလို့ပေါ့
အဲ့သည် ဂက်စ်ပိုက်ထဲကဟာတွေ နည်းနည်းပါးပါး မီးစက်ထဲရောက်လာမလားပေါ့ဗျာ
ကျုပ်က တောသားဆိုတော့ ဒီလောက်ဘဲတွေးနိုင်တယ်
အသစ်ထပ်ရှာမဲ့..ယူအက်စ်ကုမ္ပဏီတွေလည်း.. ဒို့အရေးတွေကြည့်ပြီး.. လန့်နေလောက်ပြီ…
ရထားတဲ့ငွေတွေလည်း သုံးပြီးနေပြီ..။ ဒါမှမဟုတ်.. တိုင်းပြည်အတွက်.. လွှတ်တော်မှာ ဘက်ဂျက်ခွဲပြီးနေပြီ..
ဘယ်ကငွေနဲ့.. ဒီအကြပ်အတည်းမှာ လာသုံးရမှာလည်း..
“ဟေ့.. ဒီငွေတွေဒီနေရာမှာသုံးလိုက်”လုပ်စေချင်နေတာလား…. ဟင်င်င်..
ရှိတဲ့သတင်းနဲ့.. အချက်အလက်ဖြည့်တာပါ..။ ဗွိုက်စ်ကသတင်းဖြစ်ပါကြောင်း..။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်တွင် မြန်မာရေတပ်၌ ပြည်တွင်းထုတ် လေယာဉ်တင် စစ် သဘောင်္တစ်စီးကို စတင်တိုးချဲ့ တပ်ဆင်ထားကြောင်း အမှတ် (၁) ဗျူဟာစစ်ရေယာဉ်အုပ်စု F 21 စစ်သဘောင်္ ပထမအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယခင်လအတွင်း မြန်မာရေတပ်က တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံမှ အသုံးပြုပြီးသား F21 စစ်သင်္ဘောတစ်စီး ထပ်မံ ဝယ်ယူခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့ အမှတ် (၁) ဗျူဟာစစ်ရေယာဉ် အုပ်စု၌ ပြည်တွင်းထုတ် လေယာဉ်တင် စစ်သင်္ဘော အပါအဝင် တရုတ် နိုင်ငံလုပ် F21 နှင့် F23 စစ်သင်္ဘောများဖြင့် စုစုပေါင်း သုံးစီး တိုးချဲ့ တပ်ဆင်ထားကြောင်း တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံမှ F21 စစ်သင်္ဘော သွားရောက် ယူဆောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ အဆိုပါ အရာရှိက ဆိုသည်။
သင်္ဘောများ တည်ဆောက်ရာတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူရကြောင်း၊ လွှတ်တော်မှ ဘတ်ဂျက် ချထားပေးမှု နည်းပါးသဖြင့် မူလက နှစ်၂၀ ခန့် အချိန်ယူ တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားသော စီမံကိန်းများသည် နှစ်ပေါင်း ၃၀၊ ၄၀ခန့် အထိ ကြာမြင့် သွားနိုင်ကြောင်း ရေတပ် အရာရှိတစ်ဦးက သုံးသပ် ပြောကြားသည်။
လေယာဉ်တင် သင်္ဘော… ဟုတ်စ။
လောလောဆယ် အရေးတကြီး လိုနေသေးလို့လား ?
တကယ်လိုနေတာတွေ အများကြီး၊ မ၀ယ်နဲ့တော့ မပြောပါဘူး၊ ပိုလျှံရင် ၀ယ်ပေါ့။
ခုဟာက တကထဲ၊ ပြောကို မပြောလိုက်ချင်ဘူး…
ခုမှဘာလို.မီးစက်ဝယ်ရတာလဲ။တေဇ တို. max ဇော်ဇော် asia world တို.ဆီအလှုခံလိုက်ပေါ.။
အမှန်ကတော့ မြို့ကြီးတွေကိုဘဲ တိုးပြီး တည်ထောင်ပေးတာထက် နိုင်ငံအနှံ့ တောရောမြို့ပါ တပြေးညီ ဖြစ်ဖို့အတွက် ကို စဉ်းစားကြရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။
တပြေးညီဆိုတာ မိုးထိ အဆောက်အဦးတွေ၊ မြေအောက်ရထား တွေ ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး အားလုံး ညီမျှဖို့ကိုပြောတာပါ။
ငါတို့ဟာငါတို့ဘဲ စားမယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီ အာဏာကြီးကို အသေသာဖက်ထားကြပေတော့။
(ကဘချော မှတ်ချက် မှာ ပိတ်ထားလို့ ဒီမှာ ပေါင်းပြီး မန့်လိုက်တာပါ)
ကေအိုင်အိုက.. မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းဆောက်မဲ့ဖက်က ရပ်တည်နေတာဖြစ်ဖို့များပါတယ်..။
ချိုင်းနားက.. သူလိုချင်တာမရလို့.. ကေအိုင်အိုကို.. မြှောက်ပေးနေတာဖြစ်မယ်ထင်မိတယ်..
ကချင်-ဖယ်ဒရယ်အစိုးရပြည်တွင်းစစ်က.. အဲဒီရေကာတာကြောင့်ဖြစ်တာလို့.. Timeline အချိန်ဇယားကြည့်ရင်.. သိသာတယ်..။
ဖယ်ဒရယ်အစိုးရက… နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေးတွေ ဖွင့်ပေးပြီး.. ဆာဗေးတရားဝင်လုပ်စေသင့်တယ်..
လုပ်နိုင်တယ်ရလဒ်ထွက်ရင်… .. အဲဒီနေရာကို.. တင်ဒါခေါ်ပြီး.. တိုင်းပြည်ကို… အကျိုးအမြတ်အများဆုံးပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံအငှားချပေါ့…
သူတို့..တည့်တည့် အကူအညီတောင်းကြည့်ပေါ့..။ ချိုင်းနားကိုလည်း.. အသိပေးပေါ့.. ရျင်းပြညှိယူပေါ့..
တော်ကြာ.. ဗကပပြန်ပေါ်လာပြီး.. မြန်မာတပြည်လုံးပြည်တွင်းစစ် ထဖြစ်နေဦးမယ်..။
ဟိမ၀န္တာတောင်တန်းကရေခဲတွေ.. ပျော်ကျနေတာ.. ဒီနှစ်ပိုင်းတော်တော်ဆိုးလာတယ်လို့.. သတင်းတွေထဲဖတ်ရတယ်..
ဆိုင်၇ာရေဝေရေလဲသစ်တောတွေလည်း..သစ်ခုတ်တာရော.. ကျောက်စိမ်း၊ေ၇ွှဖေါ်တာရောနဲ့.. ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းနေပြီ..
ဒါဟာ.. အဖမြန်မာပြည်ရဲ့.. ရေချိုအရင်းအမြစ်တွေ.. လျှော့လာနေတာပဲ..။
လူတွေစွမ်းအားနဲ့. ၀င်ရောက်ထိန်းချုပ်တာ.. မှားတယ်လို့.. မထင်မိဘူး..
ဒါကသာ..ဧရာဝတီကိုကယ်တင်တာ.. စစ်စစ်ဖြစ်မယ်.. တွေးနေမိတယ်..
နောင်.. အနှစ်၅၀-၁၀၀ မျှော်ကြည့်ပြောတာပါ…
Photos show dramatic shrinking of Mount Everest glaciers – Telegraph
http://www.telegraph.co.uk › Earth › Earth News
Jul 18, 2010 – The 2007 photograph taken by David Breashears of the Rongbuk Glacier with Mount Everest in the. Image 1 of 2. The 2007 photograph taken …
Mount Everest Update: Dangerous Conditions, Cancelled …
About – News & Issues – May 13, 2012
Over the past few years, climbers on Mount Everest have noted that the mountain is changing as snow and glacial ices melts. More rock is …
မြစ်ဆုံ ပြန်လုပ် ဖို့ စဉ်းစား ဆိုရင် ဆည်တည်ဆောက်လို့ ရတလာ တဲ့ အကျိုး အမြတ်ပေါ် ကြည့် ပြီး ပြည်သူ တွေ က ဆုံး ဖြတ်မယ် ထင်တာ ပဲ။
မြစ်ဆုံ ကို ကန့် ကွက်ရခြင်း အဓိ က အကြောင်း အရင်း က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှာ နဲ့ နှစ် ၅၀ လုံး လုံး ကိုယ့် နိုင်ငံ က ၂၀ % ပဲ သုံးရ မှာ ကို မကျေနပ်တာ လဲ ပါတယ်။
နိုင်ငံ တွင်း ထွက်တဲ့ ရေပေါ် ၊ရေ အောက် သဘာဝ သယံဇာတ မှန်သမျှ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူ အတွက် အသုံးပြု တာ ရာနှုံး ဘယ်လောက်ရှိမယ် ဆို တာ မခန့် မှန်း တတ်ခဲ့ ဘူး။ တကယ် လဲ မသိရ ပါဘူး။
ရောင်း လို့ ရတဲ့ စီအင်ဂျီ တွေ ကျွန်းသစ်တွေ တွင်းထွက်ရတနာ တွေ အားလုံးအားလုံး က ရလာ တဲ့ ငွေ မှန်သမျှ ဟာ လည်း မြစ်ဆုံ သာဓက လို ပဲ ၂၀ % လောက် သာ နိုင်ငံ နဲ့ ပြည် သူအတွက် သုံးနေ လို့ သာ ဒါမှ မဟုတ် လုံး ၀ မသုံး လို့ သာ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံ ဆင်းရဲ နေတာ လို့ မြင်တယ်။
အခု လို နိုင်ငံ တော်နဲ့ ပြည်သူ က ပိုင်တဲ့ သယံဇာတ ကမ်းလွန် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ တွင်းတွေ ကို သဂျီးပြော လို့ လက်ညှိုး ထိုး ရောင်း စားထာပြီးပြီ ဆို တာ သိရတော့ ကလေးဘ၀ က ပါးစပ် သတင်း တခု ကို သတိယ သွားတယ်။
ဦနေ၀င်း လက်ထက် က အလုံ အမှိုက်ပုံ ကို ဂျပန်က ၀ယ်တာ မရောင်း ခဲ့ ဘူးတဲ့ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသေချာ ဘူးနော်။
မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အမှိုက် ပုံ တောင် တန်ဘိုး ထားတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ဗါယ် နဲ့ မရောင်းတာလား၊
ဂျပန်က (ဥပမာ)တစ်ရာ နဲ့ ပေး ၀ယ် ပြီး တသိန်းလောက် ချမ်းသာ သွားမယ် ဆို တာ သိလို့ မရောင်း တာလား ဆို တာတော့ အရပ် ကတို့ ပဲ စဉ်းစားပေးပါ နော်။
မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး၊ မြို့ပေါ်မှာနေသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျေးလက်မှာနေသူပဲဖြစ်ဖြစ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရကို ရမှဖြစ်မယ်။ ဒါမှ ခေတ်နောက်ကျန်နေခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ အယူအဆတွေ၊ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ပိုပြီးသိလာနိုင်မယ်။ ပိုပြီးလေ့လာနိုင်မယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်ဖို့ နည်းမျိုးစုံကို စဉ်းစားကြရမယ်။ ဒီဇယ်နဲ့ထုတ်မလား၊ ရေအားနဲ့ထုတ်မလား၊ လေအားနဲ့ထုတ်မလား၊ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ထုတ်မလား၊ နျူအားနဲ့ထုတ်မလား၊ ရတဲ့နည်းနဲ့ထုတ်မှရမယ်။ ကျေးလက်ကလဲကျေးလက်အလျှောက်၊ မြို့ပြတွေကလည်းမြို့ပြတွေအလျှောက် မြန်သထက်မြန်အောင်ထုတ်မှရမယ်။ ဒီလုပ်ငန်းလုပ်လိုသူတွေကို လည်း လိုင်စင်နဲ့ ချေးငွေချပေးဖို့လိုတယ်။ လျှပ်စစ်မရှိရင် ဘာပစ္စည်းမှ မထုတ်နိုင်ဘူး။ နေဘို့တစ်ခုတည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ စားဖို့နဲ့ ကြီးထွားဖို့ပါစဉ်းစားရမယ်။ မင်းတို့လုပ်နိုင်ရင်လုပ်၊ မလုပ်နိုင်ရင် နုတ်ထွက်။ အရင်က လို အာဏာရှင်ပုံစံနဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။
အခုမီးမလောက်တာဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်က တာဝန်ရှိသူတွေ
အဲဒါထားပါတော့..။ အခုမှတော့ ချေးခြောက်ရေမနှုးတော့ပါဘူး..။
အခုလက်ရှိမီးဝေတဲ့ပုံစံက အရမ်းကိုမှားနေ ညံ့နေတာ..။
လက်ရှိမီးရသလောက်ကိုပဲ နဲနဲလေးပဲ ဝေတဲ့ပုံလေးပြောင်းလိုက်ရင်
အများကြီး ပို အဆင်ပြေသွားမှာ…၊
ပြီးတော့ အခု ၂၄ နာရီမီးအပြည့်ပေးနေတဲ့နေရာတွေက ဘာတွေလဲ..။
တိတိကျကျနဲ့ ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ရှင်းလင်းဘို့လိုပါပြီ..။
တကယ် မဖြစ်မနေ မီးအပြည့်ပေးရမယ့်နေရာတွေလဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုဘာမှမပြောပါ..။
ရောင်တော်ပြန်နဲ့ ရောလွှတ်တဲ့နေရာတွေလဲ အများမှ အများကြီးရှိပါတယ်။
အဲဒါတွေ မီးလူကြီးတွေ ပြန်မစိစစ်ရင် ပြည်သူက စိစစ်ဘို့လိုပါပြီ..။
ဘယ်အိမ်ရာမှာဖြင့် ပိုက်ဆံပေးပြီး မြေအောက်က မီး၂လိုင်းသွယ်ထားတယ်ဆိုတာ မဖေါ်ထုတ်ချင်ပါဘူးနော်..။
ပြီးတော့ တကယ် VIP မဟုတ်ပဲ – ဘိုးဘေးစဉ်ဆက်က တစ်ခါ VIP ဖြစ်ဖူးရင် သားစဉ်မြေးဆက်အားလုံး ခေတ်အဆက်ဆက် VIP ဖြစ်ရတဲ့ ပဒေသရာဇ်ဆံဆံ ထုံးစံမျိုးကိုလဲ ဖျက်သိမ်းသင့်ပါပြီနော..။ ခင်ဗျားတို့ခေတ်ဟာ ခင်ဗျားတို့ထင်တာထက် ပိုပြီး မြန်မြန်ကုန်နေပါပြီ…။
ရန်ကုန်တမြို့ထဲ လူတွေနေတာမဟုတ်ပါဘူး..။ နယ်မှာနေတာလဲ လူတွေပါ..။ ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြမှာကြောက်လို့ မီး၂၄နာရီပေးပြီး နယ်တွေမှာ အမှောင်ချထားမယ်ဆိုရင်လဲ မတရားပါဘူး။ တခုရှိတာက နယ်ဆိုတာ ရန်ကုန်လို မီးလာချိန်အများကြီး လိုအပ်လှတယ်မဟုတ်ဘူး..။ တရက်ကို သုံးနာရီလေးနာရီ နှစ်ကြိမ်လောက် မှန်မှန်ပေးရင် အိုကေနေပြီ။ ရန်ကုန်ကတော့ တရက်ကို ၁၆ နာရီလောက်ရမှ အဆင်ပြေပါတယ်။
လွန် ခဲ့ တဲ့ နှစ် ပေါင်း ၅၀ လောက် က စ ပြီး ဗမာ အစိုးရ ၏ ဖြစ် ပုံ က တော့ ၊
ပညာ မ ရှိ တဲ့ ကောင် က ပညာ ရှိ တဲ့ ကောင် ကို လာ အုပ် ချုပ် တယ် ၊
ပညာ ရှိ တဲ့ ကောင် က ပညာ မ ရှိ တဲ့ ကောင် ကို ပညာ ပြ ပေး တယ် ၊
ကြား မှာ ရှိ သည့် ပြည် သူ တွေ က အလကား နေ ရင်း နဲ့ သေ တယ် ၊
ဗမာ ပြည် ကြီး ဟာ အ ချမ်း သာ ဆုံး မှ အ ဆင်း ရဲ ဆုံး သို့  လား တယ် ။
ကုန်လွန်ခဲ့သော အကြောင်းတွေမှာ အမှားတွေအများကြီးပါ။
တစ်နေရာမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကမှားနေတာကို မှားမှန်းသိရက်ပါနဲ့(ကိုယ်တိုင်လဲမှားခဲ့ပါတယ်)
ပြင်လို့ရမယ်ဆိုတာသိပါရဲ့နဲ့ (မှားနေတာကိုလဲ ပြောမရသလို ပြောလဲမပြောရဲဘူးလေ)
ဘယ်သူမှ မပြင်ဘဲ အမှားအတိုင်း လိုက်ခဲ့ကြတာ ပုလွေဆရာနောက်လိုက်ပြီးရေထဲဆင်းခဲ့ကြတဲ့
အခုအချိန်မှာတော့ အရင်က ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ရေမနူး တုတ်နဲ့မဖွဘဲ ရှေ့ကောင်းအောင် ခေါင်းဆောင်သူတွေက
ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ် ကျနော်တို့လိုနောက်လိုက်တွေက ဘယ်လိုကောင်းအောင်လိုက်ကြမယ် ဆိုတာ က ပိုလိုအပ်နေပါပြီ။
ကဲ အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့ တောင့်တခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကလဲ မားမား မတ်မတ်နဲ့ ရှေ့ထွက်ရပ်လို့ရပြီ။
ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့က နောက်ကကောင်းကောင်းလိုက်ဘို့ဘဲလိုပါတော့တယ်။
ရေနူးမယ် တုတ်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ နံတာကလွဲလို့ ဘာမှ ဖြစ်မလာတော့ ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုမှားခဲ့တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ ခံရပြီးသားမို့ပါ။
နောင်ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကို ၀ိုင်းပြောကြမယ်ဆိုရင်ပိုပြီး အရသာရှိမလားလို့………………………………………….
ထုတ်တာတဖွဲ့ ဖြန့်တာတဖွဲ့ ကလည်း သူများတွေနိုင်ငံဆို အစဉ်ပြေနိုင်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မလွယ်ဘူး၊ ဝန်ကြီးဌာန တခုနဲ့တခု ဆက်စပ်မှုအားနည်းတယ်၊ ကြာတယ်။ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ လျှပ်စစ်က အချိန်နဲ့တပြေးညီ လုပ်ရမယ့်ကိစ္စ။ စလွဲတာပဲ။
ကိုယ်ဝန်ကြီးဖြစ်ရင် ဘာအရင်စလုပ် ရမလဲ စဉ်းစားလိုက်ပါအုံးမယ်လေ။။။။။။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ Political ပိုင်းကို ဒီမိုကရေစီစပြောင်းနေပြီလို့တော့ဆိုတာပဲ။ အများစုရဲ့ အာရုံနဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေက ဒီမိုကရေစီတစ်ခုတည်းကိုပဲ အာရုံစိုက်နေတယ်။ ဒါကလည်းမှန်ပါတယ်။ ဒီလိုမှဦးတည်ချက်မထားရင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ တော်ရုံနဲ့ပြောင်းလဲ လာနိုင်ဦးမှာမဟုတ်ဘူး။ အခု ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေပြီ။ Political System က ဒီမိုကရေစီကို သွားပြီးရင် Economic System က ဘယ် စနစ်ကို သွားမလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ ပြောတာမတွေ့ဘူး၊ Economic System ကိုပြောရင် Capitalism ကို သွားမှာလား၊ Socialism ကိုသွားမှာလား၊ ဒါမဟုတ် ဟိုမကျသည်မကျ Post Capitalism ကိုသွားမလားဆိုတာ ဘယ်သူမှ ပြောဆိုနေသံမကြားဘူး။ သာမန် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်က လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာ ဒီမှာ စာရေးနေတာလောက်ပဲရမယ်။ သေချာတာကတော့ Capitalism ဘက်ကိုသွားရမယ်။ ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုက Socialism အတွေးထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်လို ပြုပြင်သင်ပေးကြမလဲ။ Capitalism ဖြစ်လာရင် Tax ဆိုတာသင်ပေးရမယ်။ Insurance ဆိုတာသင်ပေးရမယ်။ Health Insurance ဆိုတာသင်ပေးရမယ်။ Social Security ဆိုတာသင်ပေးရမယ်။ Capital Market ဆိုတာသင်ပေးရမယ်။ ဒါတွေဘာမှ မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ ဘာ Education program မှလဲ မရှိဘူး။ ဒီတော့ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေက ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိမှရမယ်။ အစိုးရပိုင်းရော၊ အတိုက်အခံပိုင်းရော လူသားတွေပိုနားလည်လာနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။ အထူးသဖြင့် Utilities တွေ၊ လျှပ်စစ်ရှိမယ်။ ရေရှိမယ်။ တယ်လီဖုန်းတွေရှိမယ်။ အခုအင်တာနက်တွေရှိမယ်။ ဒါတွေကို အရည်အသွေးကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးရမယ်။ အလေအလွင့်မရှိလာအောင်လုပ်ပေးရမယ်။ Socialism လို အလကားမရနိုင်ဘူးဆိုတာကို သင်ပေးရမယ်။ မှန်မှန်ရဖို့နဲ့ အရည်အသွေးကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့ကတော့ နိုင်ငံတော်လစာငွေကို ခံစားနေသူတွေ ကပိုတာဝန်ရှိတယ်။ အရင်ခောတ်တုန်းကလို အချောင်အခွင့်အရေးယူခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေမျိုးမဖြစ်စေလိုတော့ပါ။
လှိုင်သာယာစက်မှုစုန်လာကြည်.ပါအုးံ စက်ရုံတွေတိုးလာ မီးလှိုင်းတွေမတိုးလာဘူး။
လူကြီးအိမ်တွေကျတော.လူမနေပဲ Transformer လုးံလိုက်အိမ်မှာတပ်ပေးထားတယ်။
luu noutlay says:
အခု လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မီး ပြသနာကဘယ်လိုလဲဆိုရင် ချီးပါတော့မှချီးတွင်ပေါက်ရှာဆိုသလို
ဖြစ်နေတယ် တရုတ်ကိုရောင်းလိုက်တဲ့မဂ္ဂ၀ပ်100 ဖိုးပိုက်ဆံတွေ ပြည်သူအကျိုးပြုဘယ်လုပ်ငန်းထဲ ထည့်လိုက်တယ် ကြားမိလဲ သူတို့ပိုက်ဆံအိတ်တွေဖောင်းနေတာ ပြည်သူတွေဘယ်မြင်မလဲ
(သူတို့အိမ်ကမီခံသေတ္တာထဲ ပြောင်းထည့်လိုက်တယ် ကြားတာပဲ)………
ကျနော်တို့လည်း key board တွေps2 ခလုပ်တွေကိုင်းပြီဆန္ဒတွေပြကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
ဦးပါလေရာရဲ့ မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာရဲ့ရှေ့မှာ ပြည့်စုံအောင်ထည့်ရရင် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲမှု
အန်ကယ်ကြီးရဲ့ လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာမှာ ထပ်ဖြည့်ရရင်တော့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား
မြစ်ဆုံကိစ္စ ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်ရင် သူများဝင်မယ်။ အခု မ၀င်ရင် နောင်ဝင်မယ်။ အခုက နှပ်ထားတာ။ အရေးကြီးဆုံး အချိန်လေးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်တော့ အရင်းရှင်တွေကို လွန်ဆန်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ Economic system ကတော့ Capitalism ကိုပဲ သွားမှာပါ။ ပြဿနာအစစ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားမကိုးနိုင်လို့ သူများ အားကိုးရတာ။ ဒီတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မဟုတ်တောင် သူများကို လုံးလုံးအားမကိုးဘဲ ကိုယ်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်နိုင်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ် ထင်မိပါတယ်။ တဆိတ်ရှိ ပြည်ပလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာ ဆိုတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။ ပူးတွဲ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပူးတွဲ လုပ်နိုင်မှ သူတို့ ခြယ်လှယ်ချင်သလို ခြယ်လှယ်လို့ မရမှာလေ။